Samsung Galaxy Note 7 na 6GB / 128GB ga-ada ahịa n'oge na-adịghị anya, a ga-akwụ ụgwọ ya na euro 936 | Akụkọ akụrụngwa
Izuụka gara aga, Samsung ji ọhụụ rụọ ọrụ ọhụụ Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla., dị ka ọ na-eme n'ọtụtụ mba ndị ọzọ gburugburu ụwa. Agbanyeghị, akụkọ a juru onye ọ bụla anya n'ihi na ọ bụ naanị maka ọha na eze, ụdị nke nwere 4GB RAM na 64GB nke nchekwa dị n'ime, ya bụ, nke a na-ere na mba ndị ọzọ.
Nsogbu a bụ na Samsung n'onwe ya gosipụtara na ọ na-atụle mwepụta nke nsụgharị ka elu na mba ọwụwa anyanwụ, nke ga-enwe 6GB nke Ram na 128GB nke nchekwa. O di nwute na ugbua enweghi akara nke ụdị ahu, obu ezie na onu ogugu nke mere n’ime awa gara aga enyeghachila anyi ozi di nma.
Ma ọ bụ mgbasa ozi ama ama, nke anaghị ada ada na akụkọ ụlọ ọrụ South Korea, gosipụtara onyonyo nke igbe nke ụdị ọhụrụ a nke Galaxy Note 7. O gosikwara na n'oge na-adịghị anya, ọ ga-amalite iru ahịa, na-enweghị akọwapụta ma ọ bụrụ naanị ndị China ma ọ bụ karịa.
O gosikwara na isi mmalite dị nso na Samsung enyela ọnụahịa nke nsụgharị a dị ike nke Galaxy Note 7 nakwa na ọ ga-abụ na 936 euro.
Ka ọ dị ugbu a, oge eruola ka ịche ihu iji hụ ma Samsung kpebiri ịme nsụgharị kachasị ike nke ndị isi ọrụ Galaxy Note 7, nke anyị niile nwere ruo ụbọchị ma ọ dị ka a na-ajụ ya. N'ezie, ọ dịghị onye na-echegbu onwe ya maka oge ahụ n'ihi na ọ dị ka anyị ga-enwe ọhụụ ọhụrụ, dị na ahịa yana 6GB nke RAM na 128GB nke nchekwa dị n'ime.
You chere na ọ bara uru ichere iji nweta 7 Galaxy Note na 6GB RAM na 128GB nke nchekwa dị n'ime?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Samsung Galaxy Note 7 na 6GB / 128GB ga-ada ahịa n'oge na-adịghị anya, a ga-akwụ ụgwọ ya na euro 936
Ugbu a enwere m 7 Edge 4 gb / 32 gb na m ga-ekwu na mmejuputa gam akporo na ọnụ ọnụ a bụ ihe ịtụnanya, mana Samsung nwere interface maka Nkọwa na ọ bụ eziokwu na-ahapụ anyị ịhapụ ọsọ ahụ kachasị elu site na ọkọlọtọ S nso. Yabụ site na ọnụọgụgụ mgbe ị na-atụnyere ya, yana site na mmelite arụmọrụ nke nwere ike ọ gaghị abụ oke, echere m na ọ ga-enwe ezigbo ahịa, dịka ọ na-eme. Ezigbo ihe ederede ọzọ.
Huawei P10 na onye na-agụ mkpịsị aka n'okpuru iko